Baabuurka Baabiyaha Hawada - Shanghai FAUCI Technology Co., Ltd.
FAUCI Faafiye Hawada Baabuurka
Sida loo isticmaalo badeecadan?
Jawaab: Marka hore jeex jeex filimka aluminium ee baakada, oo ku shub dhammaan qalabka granular weelka cylindrical oo leh dhexroor aad u yar. Kadib, ku rid daboolka weelka cylindrical oo leh dhexroor ka weyn jirka weelka, si adag u riix ilaa ay jirto dhawaaq “guji”, ka dibna hubi in alaabta oo dhan si adag loo adkeeyay, ka dibna lagu meeleyn karo meeshii loogu baahdo isticmaalka;
Waxaa inta badan la geliyaa baabuurka si uu jeermiska u nadiifiyo oo u nadiifiyo hawada baabuurka waqtiga dhabta ah, isagoo si joogto ah u dila bakteeriyada iyo caaryada dushiisa baabuurka, burburiya oo ka saara urta qasabka ah iyo VOCs;
CanWaxaa lagu dhejin karaa miisaska, miisaska shirarka, miisaska qolka, miisaska ardayga, ama waa lagu qaadi karaa si aad jeermiska hawada u dhow waqtiga dhabta ah;
TWaxaa lagu ridi karaa sanduuqyada alaabta carruurtu ku ciyaarto, sanduuqyada sahayda, sanduuqyada wax lagu kaydiyo, iyo qolalka wax lagu kaydiyo si loo fuliyo jeermis -dileyn iyo jeermi -dilid walxaha ku jira.
Sidee badeecadani jeermis u tahay?
Jawaab: Qalabka jeermis-dilaha ee ku dhex-jira, FAUCI AAPG Material, ayaa si firfircoon oo tartiib-tartiib ah ugu sii deyn kara sababaha jeermis-dilaha saafiga ah hawada u dhow, oo ku dili karta dhammaan noocyada fayrasyada ama bakteeriyada hawada waqtiga dhabta ah iyo si dhaqso leh.
Chlorine dioxide waa jiil cusub oo caalamku aqoonsan yahay oo leh hufnaan sare iyo jeermis dilaa ah. Dadku badiyaa waxay u isticmaalaan koloriin koloriin si ay u nadiifiyaan ujeedka. Hufnaanta jeermis-diliddu waa 2.6-10 jeer tan jeermis-dilayaasha caadiga ah sida 75% aalkolada, koloriin, iyo aashitada hypochlorous. Koloriin gaas kiimiko ah oo saafi ah ayaa si siman loogu qaybin karaa hawada gobolka moodeelka nano-scale, sidaa darteed waxay leedahay 50-100 jeer oo ka saraysa jeermiska jeermiska;
Noocyada oksijiinta firfircoon ee ROS waxaa loola jeedaa walxaha oksijiinta ee firfircoon sida xagasha xorta ah ee hydroxyl iyo radicals free peroxy, kuwaas oo la jaanqaada walxaha ugu waaweyn ee dila bakteeriyada jirka bini'aadamka, waxaana ka dhasha kala -tagga iyo kala -soocidda biyaha. Waxtarka jeermis -diidka ee walxahaas oksijiinta ee firfircoon waxay ka sarreeyaan kuwa koloriin -hawo -mareen ah oo gaas ah. Xitaa kuwa loo yaqaan endospores oo ah kuwa ugu adag in lagu dilo Dhulka, ROS isla markiiba wuu baabi'in karaa. (Ogsajiinta firfircoon ee ROS wuxuu leeyahay hawsha sare iyo cimri gaaban
Gaar ahaan, badeecadani ma dili kartaa COVID-19 iyo noocyadeeda?
Jawaab: Waqtigan xaadirka ah, inta badan badeecadaha la midka ah ee suuqa ku jira waxay dhab ahaantii isticmaalaan hypochlorite sodium-ka jaban (taas oo ah, alaabta ceeriin ee Disinfectant 84), oo soo saarta hypochlorous acid iyada oo loo marayo falcelinta nuugista biyaha, ka dibna waxay soo saartaa koloriin dioxide iyo qadar yar gaaska koloriinta sunta ah (Feejignaanta koloriinku waxay u baahan tahay oo keliya inay gaarto raad-raaca 0.001 mg/L si ay u keento sumoobid joogto ah, sidaa darteed aashitada hypochlorous looma adeegsan karo jeermiska hawada), ama si toos ah u isticmaal isla alaabta kaloriinta caadiga ah ee qaaliga ah si aad u nuugto biyo si loo sii daayo koloriin kaarboon. Marka hawo qoyan ay aad u sareyso, waxaa laga yaabaa in feejignaanta si dhaqso ah loo sii daayo, hoos -u -dhicidduna waxay ku dhici doontaa waqti gaaban.
Qalabka FAUCI AAPG ee ku dhex jira jeermiska hawada ee FAUCI wuxuu qaatay tikniyoolajiyadda oksijiinta firfircoon ee ROS iyo teknolojiyadda teknolojiyadda si tartiib-u-sii-deyn ah oo ay si madax-bannaan u soo saartay shirkaddeena, taas oo si tartiib tartiib ah oo xasilloon u sii deyn karta badbaado iyo hufnaan maaddooyinka koloriin dioxide gaas kiimiko ah iyo ROS ion oksijiin firfircoon. muddo dheer.
Factor Qodobka jeermis -diidka ee jeermiska hawada ee baabuurka FAUCI waa koloriin gaasiin ah oo gaas ah iyo oksijiinta firfircoon ee ROS, kaas oo leh hufnaan sare iyo badbaadin jeermis; halka alaabooyinka kale aysan lahayn ROS oksijiin firfircoon, waxaana jiri kara gaas -biyood hypochlorous gaseous, koloriin iyo walxo kale oo sun ah oo uu mamnuucay taabashada bini'aadamka, taas oo aan lahayn oo keliya hufnaan jeermi -dilid, laakiin sidoo kale leh khataro badbaado;
Disin Faleebada hawada ee baabuurka FAUCI waxay leedahay saameyn joogto ah muddo 3 bilood ah, halka alaabooyinka kale ay ugu badnaan yihiin 1-2 bilood.
Badeecadani ma ammaan tahay in loo isticmaalo dadka iyo duunyada ??
Isla mar ahaantaana, jeermiska hawada ee baabuurka FAUCI (ka-samaysan ee FAUCI AAPG) ayaa ka gudbay imtixaankii CMA/CNAS ee habboonaa: gabagabada tijaabada sunta neefsashada ee ba'an ayaa lagu muujiyey inaysan sun ahayn; gunaanadka tijaabada micronucleus -ka unuggu dhammaantood waa taban yahay, taas oo macnaheedu yahay inaysan jirin isku -beddelidda unugyada unugyada iyo sumowga hidda -socodka;
Agabka FAUCI AAPG iyo alaabada laxiriira ee badeecadan ayaa si aad ah loogu isticmaalay Shiinaha iyo qaar kamid ah wadammada kale ilaa dhammaadkii 2019 si looga hortago loona xakameeyo faafitaanka COVID-19, mana jirto wax jawaab celin ah oo la helay illaa hadda.
Waa maxay tijaabada iyo shahaadadani badeecadani hadda leedahay?
Jawaab: Badeecaddeennu waxay dhaaftay kormeerkii khuseeyey ee hay'adda shahaadiga ee diiwaangashan ee shabakadda caalamiga ah ee CNAS, waxayna heshay shahaadada CE-ROHS ee EU, shahaadada FDA, shahaadada MSDS, Warbixinnada Tijaabada Sunta ee Neefsashada H1N1 Enterovirus 71 Warbixinta Tijaabada, Warbixinta Tijaabada Escherichia Coli.
Waa maxay taxaddarrada isticmaalka sheyga?
Jawaab: - Ka digtoonow inaadan qoyan badeecada. Gaar ahaan, waxaa lagama maarmaan ah in laga hortago taabashada dharka, maqaarka, iyo birta marka biyaha la soo gaadhsiiyo maadaama biyuhu ay dardar gelin doonaan hoos -u -dhaca wax -ku -oolnimada maaddada. Alaabta cusub dib ayaa loo iibsan karaa si waafaqsan;
Qalabka jeermis-dilaha ee la dhisay lama qaadan karo;
ShouldWaa inaan lagu qasin jeermis -dileyaasha kale ee alkaline ama walxaha dabiiciga ah;
④ Marka bacda shaabadaysan la furin, bacdu waxay leedahay uruurin sare oo agabka ah. Kadib markaad furto bacda oo aad soo saarto badeecada, hawo geli 1 ilaa 5 daqiiqo. Ka dib marka urta la yareeyo, waxaa loo isticmaali karaa si caadi ah.
Miyaan weli u baahanahay inaan xirto maaskaro haddii aan dhigo baabuurkaan jeermis -dile hawo ah?
Jawaab: Wali waxaa looga baahan yahay deegaan khatar ah.